Maayarka Laascaanood oo Xadhiga Ka Jaray Shan Mashruuc oo ay Dawladda Hoose Hirgelisay |
Maayarka Laascaanood oo Xadhiga Ka Jaray Shan Mashruuc oo ay Dawladda Hoose Hirgelisay
Sool(GNN):-Maayarka magaaladda Laascaanood C/casiis Xuseen Taarwale, ayaa maanta xadhiga ka jaray shan mashruuc oo horumarineed oo ay dawladda hoose ka horgelisay magaaladaasi.
Mashaariicdaasi ayaa kala ahaa saddex Waddo oo Laami ah oo ay dawladda hoose ka hirgelisay magaaladaasi, kuwaasoo ay maalgisay dawladda hoose ee Laascaanood ayaa qaarkoodna ay cusub yihiin, halka qaar kalena ay dayactir iyo dib u habayn ku samaysay.
Sidoo kale waxa uu isla shalay maayarka Laascaanood xadhiga ka jaray xarunta Gawraca xoolaha ama Kaawaanka magaaladda Laascaanood iyo xarunta loogu tallo galay kobcinta dhiraynta magaaladaasi.
Mashaariicdaasi kala duwan ee uu shalay xadhiga kaga jaray maayarka Laascaanood ayaa laga maalgeliyay mashruuca JPLG ga ee isku xidhka dawladaha hoose, sida uu sheegay maayarka Laascaanood C/casiis Xuseen Taarwale.
Maayarku waxa kaloo uu sheegay in shantan mashruuc ay ka mid yihiin mashaariicda horumarinta ee golaha deegaanka Laascaanood ay ku sii sagootinayaan bulshadda magaaladaasi.
Maadaama oo uu hadda dhamaaday muddo xilkoodkii dawladaha hoose ee Somaliland, kadib muddo sagaal sanadood ah oo ay kuraasta fadhiyeen.
Saddexdan Waddo ee xadhiga laga jaray waxay kala yihiin jidka isku xidha Qubuuraha Sayid iyo gudaha magaaladda Laascaanood, jidka isku xidha cusbitaalka guud ee Laascaanood iyo xaafadda Shacabka, iyo sidoo kale jidka isku xidha xaafadda Dix-janno iyo suuqa magaaladaasi.
Maayarka oo arrimahaasi ka warbixinayayna waxa uu yidhi, “Waxaan hadda taagan nahay, oo aan xadhiga ka jaraynaa Wadadii saddexaad. Wadadani waxay isku xidhaysaa xaafadda Shacabka iyo dhakhtarka weyn.
Waxaynu hore xadhiga uga soo jarnay, Wadadda isku xidha xabaalaha iyo magaaladda iyo wadadda isku xidha Gooladda ilaa masaajidka Hudda. Saddexdaa mashruuc oo Waddooyin ah, ayaynu maanta xadhiga ka jaraynaa”.
“Waxa kaloo aynu maanta xadhiga ka jarnay, xaruntii Gawraca ee xoolaha lagu qalayay, iyo xaruntii dhiraynta ee magaaladda Laascaanood, waana isku shan mashruuc”.
Geesta kale, C/casiis Taarwale, waxa uu xusay in mashaariicdani ay noqonayaan kuwo ay ku sii sagootinayaan mashaariicdii horumarineed ee ay bulshadda Laascaanood u hayeen.
Maadaama oo uu muddo xiloodkoodii dhamaaday, waxaanu yidhi “Golihii deegaanka iyo dawladda hoose ee Laascaanood, mar walba waxay heegan u ahaayeen horumarinta degmadda Laascaanood. Shantan mashruucna waxay ka mid yihiin horumarinta uu ku sii sagootiyayo golaha deegaanka ee degmadda Laascaanood shaqadoodii ay ku sii dhamaanayso”.
Dhinaca kale, xoghaya dawladda hoose ee Laascaanood C/raxmaan Khadar Gaas, oo xadhig ka jarista Waddooyinkaasi maayarka ku wehelinayay ayaa isna tilmaamay in Waddooyinkani ay tayo ahaan ka duwan yihiin Waddooyinkii hore looga hirgeliyay magaaladda
Waxaanu u mahad celiyay shirkadda dhistay Waddooyinkaasi iyo mashaariicdaasi kale sida dhakhsaha ah ee ay mudadda gaaban shirkadu ugu dhamaystirtay.